Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ na -agbasa Australia » Mpaghara Isi Obodo Ọstrelia na -abanye mkpọchi COVID zuru ezu
Airlines • Airport • Akụkọ na -agbasa Australia • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Akụkọ Ọchịchị • Akụkọ Ahụike • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Hotels & Ebe ntụrụndụ • News • Iwughachi • Ịrụ ọrụ • Safety • Ịzụ ahịa • Tourism • Transportation • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Akụkọ dị iche iche
Obodo isi obodo Australia na -abanye mkpọchi COVID zuru oke
N'okpuru mkpọchi ahụ, a ga -ahapụ ndị bi na Canberra na gburugburu ya ka ha pụọ ​​n'ụlọ maka ihe ndị dị mkpa gụnyere ọrụ dị mkpa, nlekọta ahụike, nhọpụta ọgwụ mgbochi, ịzụ ahịa nri na otu elekere mgbatị ahụ kwa ụbọchị.
Obodo Isi Obodo Ọstrelia dekọrọ ikpe COVID-19 ọhụrụ mbụ ya n'ime ihe karịrị otu afọ.
Nwoke ahụ na -efe efe n'ime obodo na -amaghị ebe o si ebute ọrịa.
Territorykèala ahụ ga -abanye na mkpọchi ụbọchị asaa site n'elekere ise nke mgbede Tọzdee.
Andrew Barr, onye isi minista nke Isi Obodo Australia (ACT), mara ọkwa na ókèala ahụ ga-abanye na mkpọchi mgbe edekọsịrị ikpe COVID-19 ọhụrụ mbụ ya n'ime ihe karịrị otu afọ.
ACT ga -anọ na mkpọchi ụbọchị asaa site n'elekere ise nke mgbede Tọzdee mgbe otu nwoke dị afọ iri abụọ nwalere nyocha nke ọma maka coronavirus.
The Obodo Ahịa Australia Ahụike kwuru na nwoke a na -efe efe n'ime obodo na -amaghị ebe o si ebute ọrịa.
Nke a bụ ikpe mbụ COVID-19 achọpụtara na mpaghara ACT n'ime ihe karịrị ọnwa 12.
Barr kwuru, "Mkpebi mkpọchi a bụ nsonaazụ dị mma na mpaghara a, ikpe na -efe efe n'ime obodo," Barr kwuru. "Anyị amabeghị ebe butere ọrịa a, mana a na -eme nyocha sara mbara ọtụtụ awa."
Ọ gbakwụnyere, "Nke a bụ ihe egwu ahụike ọha kacha njọ nke anyị na -eche ihu n'ókèala a n'afọ a, n'ezie, kemgbe mmalite oria ojoo a."
Jesse Chang ekwu, sị:
Ọnwa Nke Asatọ 12, 2021 na 14:05
Obodo ndị ọzọ n'ụwa niile kwesịrị ịmụta ihe n'aka ACT!